भेनेजुएला प्रकरणमा नेकपा भित्र दुई धार : कसरि भए ओली भन्दा प्रचण्ड बलियो ?::Nepalese News Portal
भेनेजुएला प्रकरणमा नेकपा भित्र दुई धार : कसरि भए ओली भन्दा प्रचण्ड बलियो ?
काठमाडौं । भेनेजुएला प्रकरणले आन्तरिक विवादमा फसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा दुई धार सतहमा आएको छ । भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोधमा अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वक्तव्य जारी गरेपछि त्यसलाई लिएर पार्टीमा मतभेद उत्पन्न भएको हो ।
यो प्रकरणमा नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीबीच यतिबेला दोहोरी नै चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डको विज्ञप्तिलाइ ‘चिप्लिएको’ भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा कूटनीतिक गल्ती भएको स्वीकारेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति प्रचण्डले तत्काल असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीलाई जवाफ फर्काउदै प्रचण्डले आफूले जारी गरेको वक्तव्यलाई पार्टीको सचिवालय बैठकले आधिकारिक भनिसकेको अवस्थामा एउटा व्यक्तिले के भन्छ भन्ने कुराको अर्थ नहुने भएकाले भेनेजुएला मामिलामा आफ्नो अडान आधिकारिक नै भएको बताए ।
प्रचण्डको वक्तव्यका कारण अमेरिकासँगको सम्बन्धमा चिसोपन आउने देखिएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली त्यसलाई केही सच्याउँदै ‘शब्द चिप्लिएको’ भन्न बाध्य भए । प्रचण्डले भने आफ्नो वक्तव्यको बचाउ गर्दै कुनै मुलुकले सार्वभौम राष्ट्रलाई हस्तक्षेप नगरोस् भनेर ‘राजनीतिक वक्तव्य’ दिएको उल्लेख गरे ।
भेनेजुयला प्रकरणमा दुई अध्यक्षको परस्पर विरोधका अभिव्यक्ति आइरहेकै बेला शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सरकारविरुद्ध नै आक्रोश पोखे । अघिल्ला प्रायः सम्बोधनमा सरकारको बचाउमा बोल्ने गरेका उनको शुक्रवारको आक्रोश भेनेजुयला प्रकरणकै निरन्तरताका रुपमा कतिपयले अर्थ्याएका छन् ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाका दुइ अध्यक्षबीच मतभेद बढ्दै जाँदा पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलनमा समेत परिवर्तन हुनसक्ने कतिपयको विश्लेषण छ । यसअघि नै स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली भन्दा शक्तिशाली देखिएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेनेजुएला प्रकरणमा पनि पूर्व एमालेका नेताहरुको साथ् रहेको बताइन्छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुको साथ् प्रचण्डलाइ हुने भएकाले यो प्रकरणमा पार्टी भित्र ओली भन्दा प्रचण्ड बलियो हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।